Jereo ny SQL Server 2014 Certification - ITS Tech School
Jereo ny fanamarinana SQL Server 2014
Nanome ny mari-pahaizana vaovao momba ny SQL Server 2014 sy fanadinana mifandraika i Microsoft. Satria ny karazana SQL Server vaovao dia voafaritra amin'ny fepetra fisorohana sy ny fahabangan'ny fanatanterahana azy, dia nametraka ny DB DB izy ireo fa tsy amin'ny fisoratana MCSE ihany no manangona izao fotoana izao.
Ny Microsoft dia hivezivezy fitaovana fanomanana fanadinana vaovao iray volana mialoha ny fanatsarana ireo fanadinana.
Araka ny fantatrao dia mandeha miaraka amin'ireo singa vaovao ireo ny SQL 2014:
Fomba fahatsiarovan-tena ho an'ny famonoana
Famerenana sy fanamafisana ny loza amin'ny alàlan'ny Azure
Fitaovana novaina novidiana sy niangona
Governora Resource controls IO
BI dia manasongadina: Power Query, Power Map, Polybase
Tsy misy tsininy
Mba hisaintsainana ny eritreritra momba ny votoatin'ny SQL Server 2014 amin'ny fanadinana 461, 462, ary 463 dia namerina ny fanambarana MCSA ho an'ny MCSA SQL Server 2014 ny Microsoft Learning. Satria ny fiovana amin'ny fanadinana tsirairay dia maotina ny habe sy ny SQL Server 2014 aptitudes, dia ilaina ny mijery MCSA: Ny tompon'ny certificat de SQL Server 2014 dia hanana ny duplicate azy ho toy ny fomba fitaratra ny anaran'ny anaran'ny accreditation.
MCSE sy Data Platform: Business Intelligence dia novolavolaina tamin'ny April 2014 hanamafy ny votoatin'ny SQL Server 2014. Raha nahazo ny fankatoavana ny MCSE ianao talohan'ity, dia tsy hohadihanao amin'ny SQL Server 2014 na ny famoahana amin'ny hoavy raha tsy efa vita ny fanadinana indray.